म त भन्छु ” नेपाल एकचोटी चुर्लुम्मै डुब्नु पर्छ,कगाँल हुनुपर्छ। यो कस्तो नचाइने कुरा हो ? भन्नुहोला! हो म चाहान्छु नेपाल टाट पल्टनु पर्छ। बिदेशी ले अनुदान र ऋण रोक्नु पर्छ, छिमेकीले दानापानी छेक्नुपर्छ।
नेपाल टाट पल्टियो भने भ्रष्ट नेताले लुट्न पाउदैनन् ।आफ्नो पेशा परिवर्तन गर्नुपर्छ। घुसियाँ कर्मचारीहरुले जागिर छोड्नुपर्छ। कमिसनमा बाच्ने दलालहरु उत्पादन तिर लाग्नु पर्छ।
खान नपाउने जनतालाई खासै फरक पर्दैन देश टाट पल्टिए पनि किन कि देश टाट नपल्टिदा पनि यो बर्ग भोकै नागैँ थियो पल्टिए पनि त्यो भन्दा बिजोक हुनुपर्ने केहि हुदैन् ।
आमा मर्दा किन्नुपर्ने कात्रोमा पनि कमिसन नभईकन डेग चल्दैन् अहिलेको यो घुसिया तन्त्र । देश बिकास भएन भनेर हरेक पटक जनतालाई सडक उतारियो ब्यबस्था परिवर्तन गराइयो समस्या त्यहाँ रहेनछ। समस्या टाउको मै रहेछ हामिले पेटको अप्रेसन गर्दै रह्यौ।
त्यहिँ फाइदा उठाउँदै कहिले काग्रेस कहिले कम्युनिष्ट मिलेर देश चिनाझप्टी मै मिलाइ मिलाइ लुटेर देखाए । हामी जनता हेरेको हेरै भयौ। चुनाब आउछ पख्लास् पनि भन्ने गरिन्छ चुनाब आइपुगेपछि लज्जासरणम् त्यहाँ रुख र सुर्यको झण्डा तल्तिर लामबद्ध हुन्छौ। यसैकारणले पोज मिलाई मिलाई बला**र गरिरहेका छन् नेताहरु ।
अब हाम्रो पोज परिवर्तन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय सबालमा सँवेदनशिल बन्नुपर्छ। उत्पादन तिर लाग्नु पर्छ मुलुकलाई मगन्ते नेपाल भनेर चिनिन स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाललाई सुहाउदैन । जय नेपाल जय स्वाभिमान ।